မက်ဆီ ရော်နယ်ဒို တို့ထက် ကိုယ့်ရဲ့အသင်းမှာ ပိုရှိစေချင်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရော်ဘီဆားဗေ့ခ်ျ - SPORTS MYANMAR
မက်ဆီ ရော်နယ်ဒို တို့ထက် ကိုယ့်ရဲ့အသင်းမှာ ပိုရှိစေချင်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရော်ဘီဆားဗေ့ခ်ျ
By Edi Tor October 10, 2021
ဝေးလ်နဲ့ ဘလက်ဘန်း ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဖြစ်သူ ရော်ဘီဆားဗေ့ခ်ျက သူ့ရဲ့ အသင်းမှာ မန်ယူနိုက်တက် စူပါစတား ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို နဲ့ ပီအက်ဂျီ စူပါစတား လီယွန်နယ်မက်ဆီ တို့ထက်စာရင် လီဗာပူး စတား မိုဟာမက်ဆာလားကို ပိုမို ရှိစေချင်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆာလားဟာ ဒီရာသီ လီဗာပူး အသင်း အတွက် အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ပြသလျက် ရှိနေပြီး မာဆေးဆိုက် ကလပ် အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၉ ပွဲမှာ ၉ ဂိုး သွင်းယူထားခဲ့ပါတယ်။
ဆာလားဟာ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ မတိုင်မီ ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ မာနေးရဲ့ အဖွင့်ဂိုး အတွက် အကောင်းဆုံး ဖန်တီးပေးခဲ့သလို သူကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ကိုယ်တော် အစွမ်းနဲ့ စီးတီး ကစားသမား ၄ ယောက်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရကာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့် ၃ နေရာသာ ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆာလား ကတော့ တစ်ရာသီလုံး တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပြသခဲ့တာကြောင့် ဘလွန်းဒီအော အတွက် ကစားသမား အယောက် ၃၀ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာ မက်ဆီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို တို့လို ကစားသမားတွေလည်း ပါ၀င်နေပြီး အာဖရိက ကိုယ်စားပြုကတော့ ဆာလား အပြင် မန်စီးတီးရဲ့ ရီရက်မာရက်ဇ် တစ်ယောက်သာ ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီနဲ့ ရော်နယ်ဒို တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ် တစ်ခုကျော်လောက် ဘလွန်းဒီအောဆုကို လွှမ်းမိုးထားသူတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘောလုံး အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဆားဗေ့ခ်ျက လက်ရှိ အချိန်မှာ သူ့အနေနဲ့ မက်ဆီ ရော်နယ်ဒို တို့ထက်စာရင် ကိုယ့်ရဲ့ အသင်းမှာ ဆာလားကိုသာ ရှိစေချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆားဗေ့ခ်ျက “လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး မိုဟာမက်ဆာလားဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ မက်ဆီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို တို့ကို ကျော်ကာ သူ့ကို ကိုယ့်အသင်းမှာ ရှိစေချင်သလား? အမှန်ပါပဲ။ အမ်ဘက်ပေ ထက်စာရင်ကော? အမှန်ပါပဲ။ နေမာကော? ဆာလား ပါပဲ။
လက်ရှိမှာ တိုက်စစ်ပိုင်း အတွက် ကိုယ့်အသင်းမှာ ကစားသမား ရွေးချယ်ရမယ် ဆိုရင် ဆာလားဟာ ကျွန်တော့် အတွက် ပထမဦးဆုံးပေး ကစားသမား ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိ အချိန်မှာ မိုဆာလာဟာ ဖန်တီးမှုပိုင်း ၊ assist ပိုင်း နဲ့ သွင်းဂိုးပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။